Kuvanzika muWindows 10 hakupo ... | Linux Vakapindwa muropa
Zvakawanda zviri kutaurwa nguva pfupi yadarika nezve Kugadzirwa kweMicrosoft kwazvino, kwayo Windows 10 inoshanda sisitimu. Runyerekupe rwakawanda, kuwongorora kwakawanda, makomendi akawandisa uye tarisiro zhinji kune "fanwin" uyo akamirira kuburitswa kwazvino semvura muna Chivabvu. Asi mubvunzo ndewekuti ino sisitimu yakakosha here.
Zvinoenderana neruzivo rwunosvika patiri, unogona kuva chokwadi che100% uye nekudaidzira zvinonzwika izvozvo Windows 10 hapana mubvunzo iri OS rakanakisa riripo nhasi. Hongu, ndiyo yakanakisa OS (Kushanda Spy) pasina mubvunzo. Iyo yakanakisa yekushandisa spy, nekuti kana kuvanzika kwaitova nyaya yakakosha mumasisitimu azvino, mukati Windows 10 inogona kushandurwa kuita chimwe chinhu chisingagone.
Izvo zvakawanda zvingasarudzwa, vachifungidzirwa kusimudzira ruzivo Mune Windows nharaunda, vanotaura huwandu hwakawandisa hwe data risingafanire kubuda uye kuti kunyangwe iwe uine nguva yakanaka yekumisa sarudzo idzi, haugone kuzviita zvizere uye ndiani anoziva kana sosi yavo yakavharwa iine zvimwe zvisingashamisi kushamisika .
Izvo zvakawanda zvinopihwa kubva kuMicrosoft nekuti munhu wese anochinja kuenda Windows 10, kunyangwe avo vane pirated system, vachipa marezinesi kana nemamwe marudzi ezvipo mukuvandudzwa kweshanduro iyi nyowani, pamwe kuhwanda kuseri kwebhizinesi rinotobatsirika kupfuura iro rekutengesa. ye software, ichipa Windows 10 sevhisi uye inonzi iri kubata nerako ruzivo izvo zvingangoita zvine hupfumi.
Mamwe masisitimu akaita seWhatsApp Izvo zvave kutove nebasa rekutaurirana nerako ruzivo uye nechikonzero ichi ndosaka vasingadi kushambadzira kushambadzira muapp kuti vape mabhenefiti kukambani. Zvichida iri ramangwana? Kanganwa marezinesi ekutengesa neruzivo rwevashandisi? Ndinovimba kwete…
Uye kupedza ndinoda nyora huwandu hweruzivo (zvirinani iyo iyo Microsoft yazivisa kuburikidza nemvumo yelayisensi yaunobvuma kuisa iyo inoshanda sisitimu kana kuti, spy inoshanda) iyo Windows 10 inounganidza:
Mashoko pamusoro pako (semuenzaniso zita rako nesurname, email kero)
Ruzivo nezve zvishandiso zvako (mhando dzemidziyo, mabhureki, mamodheru, kumisikidza, data re sensor, manhamba efoni, mafoni, SMS, ...)
Mashoko pamusoro pekushanda kwako (software yakaiswa, shandisa, ...)
Ruzivo kubva kunetiweki dzako (chengetedzo uye imwe data yekufarira, ...)
Ruzivo rwekufambisa (kuongorora nhoroondo, zvido zvekutsvaga,)
Faira ruzivo (ruzivo nezve mafaera uye zvinyorwa, ruzivo nezve mafomu avanovhura nawo, nguva dzekushandisa, mavara akanyorwa mugwaro rakashandurwa, nhoroondo uye mazwi akakosha akatsvaga muWindows search engine, ..)
Iyi njodzi yezviyero zvakakura. Semuenzaniso, kuunganidza ruzivo kubva kunhoroondo yekutsvaga kana mazwi akakosha akatsvaga muhurongwa hwekutsvaga injini ndizvo zvinozivikanwa se spyware Mumitemo yese. Zvinoenderana neMicrosoft ndeyekuvandudza mashandiro uye nekuita kuti tsvagiridzo dzive nenjere uye nekukurumidza, asi ... hapana munhu ane garandi yezvinoitwa neruzivo rwakadai.
Kuunganidza ruzivo rwemushandisi, maemail, nhare, nezvimwe, mukugura kunogona kuzivikanwa senzira ye "Kuunganidza ruzivo" uye inoshandiswa kusvika pakuziva akabatwa zvirinani kuti umurwise. Uye ne "kusangana," izvi zvinogona kuwedzerwa kusvika Windows 10 zvakabatana nharembozha.
Kune rimwe divi, kuzivikanwa kwevatambi vakapinda kuti vagadzirise zvinyorwa zvemavara, izvo zvinoenderana neMicrosoft zvinoitirwa kugadzirisa maficha ezwi Autocompletion uye kuperetera kutarisa, zvinonzwika kwandiri senge zvinozivikanwa se "Keylogger". Uye kana izvi zvichishandiswa kugadzirisa nharaunda, zvakanaka, chero bedzi michina isipo, asi uye kana iri online ... Unoitei neruzivo urwu? …?
Pamwe Microsoft yakanakisa sisitimu ipfumo rinocheka mativi uye zvakare iri rakakura dhizaini, kubvira imwe sarudzo uye mhinduro yevashandisi iLinux. Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Pasina kupokana Microsoft Windows 10 ndiyo yakanakisa OS
Ini ndinofungidzira zviitiko, ivo vachakudaidza kuti paranoid, kupenga, kuzvifunga, vanhu masochist, chengetedza hudzvanyiriri.
Uye chakanyanya kushata ndechekuti hazvisi nyore kuisa Linux, ini ndatomhanyira mumakepu kuyedza kuisa minty uefi haindibvumidze, chidzidzo ndapota
Zvakanaka, zvinogona kuitwa, inyaya yekutarisa muperekedzi.
Pindura kuna sancohcito
Mawindows hutachiona, hukuru, hwakakora, hukuru huripo pasi rose, hukuru zvekuti hunoenda husingaonekwe saizvozvo, asi hwakafanana negomarara rekombuta yako, hunotora zvese.
Iko kuzvininipisa maonero.
Pindura kune cies
Chokwadi ndechekuti, chandiri kuda ndechekuti isu tibude uye tigozova pcgamer paTV mumba yekutandarira (ini ndichabatawo boymachine) ndinofunga ichave yakanakisa kudyara muPC yandichaita
Matias Huenul akadaro
Icho hachisi chinhu chitsva. MuWindows zvaigara zvichishayikwa kwaive kuvanzika.
Pindura kuna Matías Huenul
SteamOS yatove kushanda zvakanaka, izvo zvaunofanirwa kumirira ndeye vulcan.
Kushumira Pestano akadaro
Ini ndinofunga izvi zvatoitwa neAroid, maitiro ayo mazhinji X-akapindwa muropa anodada sekukunda kweLinux pamusoro peMicrosoft, mapere mashoma kudaro. Sisitimu, mukuwedzera, yakabatana zvachose neinternet yatinotakura muzvikwama zvedu nehomwe, uye mairi kwete chete nhamba yedu yefoni inoenda, asiwo maemail edu, machats edu, edu masocial network, edu ekubhadhara masisitimu, edu mapikicha nemavhidhiyo , yedu nzvimbo. GPS zvese izvi panguva ya24 / 7/365 ... Izvo zvataura, ini handidi kuti ndibvumirane nekupinda kwehukama mune ese mamiriro, asi huya, ngatisarudze yakanakisa OS - mupfungwa yekuti inoti muridzi wechinyorwa- ini handisi kunyatsojekesa ndiani anogona kuhwina mubairo wekutanga ... kana pamwe hongu ;-) Kwaziso.
Pindura Servando Pestano
Zvizere unobvumirana. Ini ndanga ndisingareve kutaura kuti kuve neLinux kernel kunoponeswa uye muenzaniso we Android ndeimwe nyadzi. Eheka…
Zvinotaridza kwandiri sehuswa hwekupedzisira nezve magwaro uye mafaera. Ndokunge, vanogona kupinda mumongo wepasi rebasa uye vanhu vanofara ¿: / ???
Pindura kuna Eudes Javier Contreras Ríos
HAHAHA, ruregerero lineros kana linuxeros, mukana wako wekuonekwa wapera, waive nemukana wako Microsoft payakaburitsa windows 8 uye nyika ikauya paari nekuda kwemenyu yekutanga uye iyo metro mode, Linux haina kutora mukana wekurambwa kwevanhu ku windows 8 kuoneka, yaive nguva yakanaka yekushoropodza windows uye kuonekera zvakanyanya uye kuwedzera mugove wemusika, ASI HAVANA, ndihwo hupenyu, mikana inopihwa kamwe chete, Zvino kuti Microsoft irikuita zvinhu zvirinani, kusvika vanhu vazhinji uyo akatsoropodza 8 zvino tarisa zvakanaka pa10.
Cyter… Unofanirwa kunzwa kuti Linux yakaipa / Windows iri nani? Eya enda kumberi, usanyara ... kunyangwe mushure meizvozvo iwe unogona kudzokorora yakafanana mhinduro mune yeApple foramu. Ini ndicharamba ndichishandisa Linux nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana (zvirokwazvo unovaziva, uye hatisi kutaura nezve mutengo), kunyangwe ini ndichiwanzo kutendeukira kuWindows kune chimwe chinhu. Kuva nezvangu zvandinoda hazvireve kuramba hunhu hweimwe hurongwa, uye Windows ine mukana weiyo rutsigiro rwehardware rwevagadziri. Linux inondibvumidza imwe rusununguko uye rugare rwepfungwa, uye izvo zvinoverengeka zvakawanda kwandiri.
Pindura kuna Peter086
Shamwari, vanoti zvinotyisa ... Cyter akarurama, uye dzimwe nguva zvinorwadza. Tiri isu tese tinofara vanoshandisa Linux mushure mekuratidzwa kwenzvimbo dzakawanda muLinux uye kuti pakupedzisira zvaingova zvinetsa? Kanganwa Ubuntu 10.10? Oooh zvinoshamisa sei, ndezvipi zvakapusa zveOS uye izvozvi? Mmmm inosiya zvakawanda zvekuda ... uye kuti Windows yakakwanisa kutora mukana, iwe unofunga kuti anofara Windows mushandisi anova nehanya neruzivo rwako nhasi? Zvirokwazvo kwete, hazvina kukosha munguva dzakaipa uye zvishoma mune zvakanaka ... Ini ndinofunga kuti vashandisi veLinux vanofanirwa kutendeseka kana imwe OS ichiita chimwe chinhu "chakanaka" kumushandisi wekupedzisira. Ini pachangu ndakaodzwa mwoyo neLinux kwemakore ini ndakamira ndichinzwa kugadzikana, zuva rega rega nharaunda dzakanyanya shit, matambudziko nevatyairi veNvidia, nezvimwe. Ini ndinofunga kuva wechokwadi kuchatibatsira kushandura nyika ive nani ... kwaziso.
Zvakatipoteredza chinhu chimwe ... vatyairi ndeimwe ... usasanganise mapeya nemaapuro ...
Pablo, haisi kusanganisa mapeya nemaapuro ... anoshanda system iri zvese, nharaunda uye manejimendi manejimendi. kana zvisina kudaro ingangove peya kana apuro uye kwete, inzira yekushandisa. Ini ndinonyanya kushandisa linux kugadzira uye ini ndinoshandisa windows yemitambo. Iyo gamer nyika mune linux nyika yezvino iri kure kwazvo.
Kana linux, Android, windows, kana ios yega yega ndeyemhando yega yega yemushandisi. Kana izvo zvaunoda uri wega, rega kushandisa masocial network, maemail emahara, kuchengetedza gore kana akawanda masevhisi emahara ayo isu tese atinoshandisa. Nekuti kana chimwe chinhu chiri chemahara, chigadzirwa ndiwe.
Pindura kuna yoda
Apple (bit | inogona) yaenda akadaro
Pindura kuApple (bit | could) yaenda
Chaizvoizvo, seka vanhu veLinus vanova vanonyanyisa mune zvechitendero ivo pachavo vanoita dhimoni izvo zvavasina kuedza. Umwe neumwe nekutenda kwavo pamwe neparanoanas yavo.
Unoda Windows 10? Enderera mberi ... Unoda here Windows 8 kana 7 kana XP wobva wauya ...
Juan Manuel Fuentes Diaz akadaro
Izvo hazvidikanwe kuzviyedza kungoona kubva kure kuti nei, zvinoenderana nezvakatenderwa, nekuti icho chiri chitsva uye nei vakawedzera chinhu icho chokwadi kana nyaya uye zvimwe zvinondipa kuseka kuti munhu wese anoti kana chiri zvakanaka, ini ndinonyatso kuudza Izvo zvinongova mapenzi ekufungidzira kweakanaka uye akapusa interface yevanhu vasina kana kana nekadiki kapfungwa kezvavanoisa uyezve ivo vanozvibvumira ivo kunyengedzwa uye varegei vavape ruzivo rwavo asi zvakanaka vanofara kunzwira tsitsi vamwe uye izvo zvagara zviri
Pindura Juan Manuel Fuentes Diaz
Adrian Ricardo S. akadaro
Ini ndinofunga zvinotevera, windows 10 is a paradigm shift for windows, kubva pakubhadharirwa kuve google, munzira ipi neipi, zvakaoma kuti kambani ikwidze mhando iyi, njodzi zhinji, asi ichokwadi kuti ruzivo irworwo ... zvigadzirwa zvese nhasi zvabira ruzivo, zvakare linux, zvinongodiwa kuti uvandudze ruzivo rwevashandisi uye uwane chimwe chinhu nazvo…. Zvino kana uchiongorora windows 10 zvinondipa kunzwa kwekuti ine mafuta mashoma ... kureva kuti, izano nekuti idzva riri nani, gare gare paunotanga kuisa zvinhu zvinononoka, chimwe chinhu chakaonekwa negoogle mukati mayo chrome os, asi yanga isingazive maumbirwo, Vanhu havadi kuisa zvese kune iro gore, kana internet painodzika, kusakwanisa kuita rimwe basa pamba, nezvimwe ... Hakuna zvirinani kana zvakanyanya inoshanda sisitimu, linux (ubuntu) ine zvayakanakira uye yakaiswa mukambani mandinoshanda ndine maprinta anodarika makumi mashanu akabatana uye munhu wacho 50 komputa, nguva yese yaakandikumbira kuti ndiise mutyairi, izvozvi ndinongoibatanidza uye ndinotarisa chete kune avo vasiri mudhatabhesi kana Lexmark ... tatata. Dai ndaive nemawindows xp (yekare komputa) ndaifanira kudhawunirodha ese madhiraivha uye yaizove ngoro ndiyo yaive chikonzero chekuichinja, kuwedzera kune iyo yekuti anopinda mumabhangi uye achipa matambudziko nguva dzese uye ini ndatove yakanga iine hofori OllOs. Ndosaka ndichiti chete nguva ndiyo inogona kuziva kana Windows 0 iri Iyo system kana imwe imwe system. NENZIRA YEKUNYORA IYI NDINOFANIRA KUPA MBIRI DATA RANGU EMAIL NEZITA RANGU.
Pindura Adrian Ricardo S.
Kuti Windows inochengeta ruzivo rwako chinhu chine musoro, kana chii? akafunga kuti kungwara kweiyo OS kunoitwa nemashiripiti? Android inodarowo. Iyo "yakangwara" iyo OS ndeye, zvakanyanya kukanganiswa kwedu kuvanzika kuri.
Pindura kuna Alexant.
Ini ndinofungidzira ... hapana akaiyedza .. kutenderedza pano ... ndinoreva ... munhu wese anoti ndeye Mahara !! yemahara ndeye chete kurodha pasi ... wobva wachinja iyo Wallpaper kana desktop desktop ... inofanira kunge ichishanda .... saka une rezinesi rePaga…. zvakanaka .. avo vanotova navo windows7 kana windows 8 / 8.1 .. rombo rakanaka neiyo activation! uye avo vanoishandisa vasina kubhadhara marezinesi… zvakanaka…. ndiani zvirinani kusafunga… .po panogara paine zvirinani Linux!
Zvakanaka, kana zvakavanzika zviri zvemasocial network uye nharembozha ivo vanazvo sehure; pano chaicho chaicho chinhu ndechekuti Windows ine yega yega yekuvandudza (iyo inotora mazana emakore kurodha pasi nekuisa) inonzwa inorema, inowedzera uye haione kuvandudzika, zvinova zvinoitika kwandiri neLinux Mint.
Mhoro. Ini ndinoda Linux uye ndinoshandisa mu2boot kubvira Ubuntu 9.
Linux ine BOBOS matambudziko ayo anotyisidzira kure standard PC vashandisi. Semuenzaniso, zvakajairika kuisa distro uye haina kuziva iyo keyboard kana modem, asi nemimwe mirau yakapusa, nyaya inogadziriswa. Ivo vasinganzwisise mavhiki ndeekuti mhando yechinhu iyi ndiyo inodimbura makumbo aLINUX. Semuenzaniso SUSE ikambani yeHoldingMicrosoft, ndakaiisa, yakagadzirisa zvese zvisirizvo uye ndakarasikirwa ne50% yediski. Ndakaisunungura uye ikadzorera zvese zvakajairwa. Ipapo ini ndakaisa Ubuntu, zvese zvakashanda asi zvairema uye zvainonoka. Ini ndakaburitsa ndokuisa iyo MINT uye ikozvino ndiri kufara, hongu kudzamara inotevera yekuvandudza uko matambudziko eupenzi achazondisiya maawa ndichitsvaga mhinduro yavo.
Dambudziko reLinux harisi Mocrosoft kana Mansanita, dambudziko ndereVhiki risingakwanise kunzwisisa kuti haugone kutumira OS ine matambudziko emhando dzakadai sekusaziva maDrives kana achitoita. Kana iyo inoziva iyo keyboard uye haina kuisa maaccents nenzira kwayo sezvinoitika neKDE. Idiot dambudziko rakanditorera 2 weeks kuti ndiwane damn solution !!!!
Muenzaniso wakanyanyisa weWikies unowedzera ndeweUbuntu, uyo wakazadzwa nehunhu husina zvibereko kubva kuUnited, kana zvakadaro mushure memakore akati wandei vakaita Kubuntu zvakare, asi ichiri chimwe chinhu chechipiri mutsara. Calro akauya vakomana kubva kuMint ndokugadzirisa dambudziko. asi vangani mamirioni evashandisi vakasiya pane yekutanga kuiswa ??????
Imwe nyaya yakakosha iyo kambani yega yeinjiniya inofanira kutiza kubva kuLinux kushomeka kwechirongwa chekubata maDWG mafaera zvine hunyanzvi uye tisingataure nezve 3D engineering softwear .. kuzvishandisa zvinehunyanzvi. Izvi zviviri zvinouraya zvakare.
Linux inofanira kunge iri iyo inonyanya kushandiswa OS munyika, asi kusvikira maSvondo amira kuve mushoma nerd izvo zvichanetsa …….
Paul kelsey akadaro
GNU / Linux yakachengeteka uye une rusununguko rwakawanda, unogona kuzvishandura sezvaunoda uye unobvisa mavhairasi uye zvirongwa zvinowedzera mashandiro uye zvinoita kuti PC inonoke: ndakaisa Windows 10 uye zvinotyisa nekuunganidza data, uye inomanikidza iwe kurodha pasi zvinyorwa. Iyo Edge browser ndeye Iexplore metro vhezheni. Iwe une zvishoma uye zvishoma kutonga kwePC yako. Ini ndakaisa Ubuntu, ndakabvisa kubatana uye ndakaisa gnome, uye ndakadzikama, kunyanya kana zvasvika pakutsvaga. Nekudaro, ini handidi kubvisa Windows kubva paPC yangu nekuti ini ndinoida kuti ndimhanye mitambo uye mamwe mahofisi, zvinoshandiswa nezvimwe zvirongwa zvisingashande zvakanaka neWine uye zvisingaenderane neGNU / Linux. Kwaziwai!
Pindura kuna Paul Kelsey
Al, ndakafarira chirevo chako, kana uine dambudziko mune chero vhezheni yeLinux, zvinotora nguva yakareba kuti uwane mhinduro mune yakanakisa kesi uye dzimwe nguva havatombo gadzirisa chero chinhu ndokusiya iwe "wakanamatira". Zvirinani Microsoft inogadzirisa dambudziko kwauri, ini ndine Windows 10 yakaiswa.Ndiri kutendeseka newe ndisati ndaiisa ndaive ndisina chokwadi, unoziva Nyowani System zvimwe zviwanikwa, zvichinonoka etc. Ini handina basa nekuti "akanaka" sevamwe (Linuxneros / Manzanitas) ini ndine hanya nezve kugadzirwa nekuti ndizvo zvandinoda "nani System"? Ivo vese vane zvavanokanganisa kusvika ku "Yakarumwa Apple" saka pane "zvigadziriso" ivo vanongova zvigamba zvezvikanganiso zvavo. Nekudaro iine Windows 10 komputa yangu inotanga ipapo, iyo Internet browser inokurumidza, kunyangwe kupfuura firefox uye google. Ndozvifarira. Uye Paul Kesley. Vangani vashandisi veLinux varipo pasirese? 10, 50, 1000, 1,000,000 zvichienzaniswa nemamirioni eMicrosoft. Ndiani ane hanya nekugadzira hutachiona hweLinux ...? Zvisinei pane mashoma. Rangarira iyo Manzanita "Iyo Yakachengeteka Sisitimu" Yakapurwa. Wow wakasimba sei!
Chokwadi chinyorwa ichi chakanyorwa neWindows Fanboy ... Kana Windows iri yakanyanya kushandiswa haisi nekuti ndiyo yakanakisa ...
Enrique Hizaola akadaro
ZORIN OS 10 Ndiyo imwe nzira yakanaka kune avo vanoshandisa WINDOWS kutanga muLINUX, sezvo ichipa nharaunda yakafanana neWindows uye ichikubvumidza kunyora W7 kana XP desktop.Uye kuiswa kwayo kuri nyore.
Pindura Enrique Hizaola
KWANGU, windows 10 ndiyo yakaipa kwazvo yandakaona maererano nemashandiro asi zvakatoipisisa kuti vana ava …… yeMicrosoft vanodzivirira mabasa avo asina musoro kubva kudzimwa ayo OS anotukwa ane
Pindura kuna SUPERWAR
Chigadzirwa hachisi windows 10, ndezvedu
Pindura kune elmechanic
Handizive kuti vanochema zvakanyanya nekuvanzika uye vanoshandisa Google, Amazon, Facebook, Nextflix, zviuru zvemakuki pamapeji ewebhu zvinogamuchirwa uye angangoita ese mashandiro nhasi anotora data.